DEG-DEG: Weerar Mar Kale Khasaare Loogu Geystay Ciidamada Kenya Oo Maanta Dhacay - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » DEG-DEG: Weerar Mar Kale Khasaare Loogu Geystay Ciidamada Kenya Oo Maanta Dhacay
DEG-DEG: Weerar Mar Kale Khasaare Loogu Geystay Ciidamada Kenya Oo Maanta Dhacay
Wararka ka imanaya dhulka Soomaaliyeed ee ay Kenya gumeysato ayaa waxay sheegayaan in maanta mar kale ciidamo Kenyaati ah la weeraray kuwaasoo loo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed.
Weerarkan oo sida ay wararku sheegayaan ahaa qarax ayaa saaka ka dhacay nawaaxiga deggaanka Dabaasiti oo hoostaga Mandheeea, waxaana lala beegsaday gaadhi ciidan oo ay saarnaayeen askarta loo yaqaano GSU ee koofiyad-casta ah.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in Qaraxu uu qaybta hore ka burburiyay gaadhiga, waxaana inta la og yahay uu sababay dhimashada hal askari iyo dhaawaca afar kale.
Todobaadkan gudihiisa ayay ahayd markii in ka badan 10 askari oo Kenyaan ah lagu dilay weerar qarax ah oo lagula beegsaday duleedka magaalada Dhoobley, iyadoo Uhuru Kenyatta uu qiray in weerarkaasi lagaga dilay 9 askari.
“Wakhti hore oo maanta “shalay” waxaan dareemay Argagax iyo murugo kadib markii aan ogaaday in aan ku weynay sagaal kamid ah ciidamadeenna wadaniyiinta ah weerar Argagaxiso oo ka dhacay Soomaaliya” ayuu yiri Uhuru Kenyatta.
Madaxweynaha wadanka Kenya ayaa ka tacsiyeeyay ciidamadiisa waxaanu sheegay inuu u tacsiyeynaayo ciidamadiisa oo uu ku tilmaamay iney yihiin ” geesiyaal” difaacayay Kenya.
Qoysaska ciidamada ku dhintay qaraxa Dhooblay duleedkeeda ka dhacay ayuu u rajeeyay iney adkeystaan, islamarkaana ku sabraan.
Shalay ayaaa warbaahinta Kenya waxay baahiyeen sawirro muujinaya burburka gaadhiga, waxaana sawirrada laga arkayaa iyadoo gaadhigu u kala dhacay labo qeybood, taas oo muujineysa awoodda qaraxyada ay adeegsadaan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.